Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Cofa apha ukuba le ngxelo yakho! » IMINENGA EBHAYIBHILEYO: Eyona nqanawa inkulu yoMthwalo eMhlabeni
I-FLYING WHALES iphuhlise isisombululo esitsha, esifikelelekayo kunye nesihambelana nokusingqongileyo ukuthutha imithwalo enzima kakhulu kwiindawo ezixineneyo okanye ezikude.
Inkampani yaseFranco-Quebec FLYING WHALES, eyila, ivelise kwaye isebenze i-airship enkulu kunazo zonke emhlabeni (i-LCA60T), ilungiselela ukuphuhlisa imisebenzi yayo eQuebec.
Uhlengahlengiso loLwakhiwo lwabaSebenzi
Ukufikelela kwinqanaba elifunekayo lokufumana iphepha-mvume layo lokusebenza, I-FLYING WHALES ibhengeza ukuba iphinda ihlengahlengise ubume bayo babaninizabelo.
NgoSeptemba 9, 2021, i-AVIC GENERAL, ithengise izabelo zayo ezilingana ne-24.9% yezabelo kwi-FLYING WHALES, ngokudlula i-AVIC JIKELELE yaseFransi, kubanini-zabelo baseFransi abakhoyo ngoku abathe badityaniswa liqela lebhanki laseFransi i-Oddo.
Ngenxa yoko, abanini-zabelo baseburhulumenteni baseFransi nababucala baphethe i-75% ye-FLYING WHALES kunye neQuebec i-25% nge-Investissement Québec (IQ). I-subsidiary yaseMontreal "Les dirigeables FLYING WHALES Québec" yi-50.1% ye-FLYING WHALES kunye ne-49.9% yi-IQ.
Quebec: Isiseko seKhaya eMelika
Umnqophiso wesebe laseMontreal kukungena kwicandelo le-aeronautical yase-Quebec kunye nentsebenziswano kunye nabadlali becandelo abasekiweyo nabathembekileyo ukuze bakhe kwezinye zeenzuzo zeqhinga le-LCA60T. Oku kudityaniswa kuya kunceda ukukhulisa ishishini le-aeronautical yaseQuebec, ngakumbi ngokubhekiselele kumandla avuselelekayo kweli qela liphambili lezoqoqosho.
I-FLYING WHALES iya kulungiselela indawo yoshishino eQuebec kwimizila yendibano yeenqwelo zayo ezipheleleyo ze-LCA60T ze-airships zaseMelika. Iindawo ezininzi ziphantsi kophando. Indawo ekhethiweyo iya kuvelisa zonke ii-LCA60T ezijoliswe eMelika. Oku kubonisa amashumi ezigidi kutyalo-mali kwaye, ekugqibeleni, kuyilwe imisebenzi engama-200 ethe ngqo, esemgangathweni kunye nehlawulwa kakuhle.